जीवजन्तुको अवैध शिकारले कोरोना भाइरस फैलिएको आशंका ! « Drishti News
जीवजन्तुको अवैध शिकारले कोरोना भाइरस फैलिएको आशंका !
साम म्याकनिल/क्यान्डिस चोई
बेइजिङ, ५ फागुन (एपी) । सन् २००२ मा नयाँ जीवाणुको प्रकोप देखापर्दा चीनले जंगली जीवित वा मृत जनावरहरू बजारमा खुलेआम बेचबिखन गर्न रोक लगायो । यही जीवाणुका कारण प्राणघातक सार्स फैलिएको त्यसबखत अनुमान गरिएको थियो ।
अहिले सार्ससँग मिल्दोजुल्दो कोरोनाभाइरसले चीनलाई सताएको छ, र रोगको मुख्य उत्पत्ति तिनै जीवजन्तुमाथि आशंका गरिएको छ । त्यस्ता जीवजन्तुको बेचबिखनमाथि लागेको प्रतिबन्ध पछि हटाइयो, र जनावरहरू फेरि बजारमा देखा परे । अहिले अर्को कोरोना जीवाणु चीनमा फैलिएको छ, र हालसम्म १ हजार ७०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने ६५ हजारभन्दा बढी मानिस बिरामी परेका छन् । सार्सभन्दा यो अझ बढी खतरनाक देखिएको छ ।
आखिर यस जीवाणुको मुल स्रोत के हो ? अझै पनि शंकास्पद छ, तर कोरोना जीवाणुको स्रोतका लागि तिनै अव्यवस्थित जंगली जनावरमाथि औंला तेर्सिएको छ । एक दर्जनभन्दा बढी चिनियाँ शहरहरूका ६ करोडभन्दा बढी मानिस बन्दीझैं अवस्थामा छन् । यही कारण वन्यजन्तुहरूको बिक्रीलाई स्थायी रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने आवाज उठेको छ । धेरैको विचारमा स्वादिष्ट मासुको नाममा वन्यजन्तुको खोजी गर्ने सीमित धनी मानिसका कारण यसको व्यापार फस्टाएको हो ।
टेनेसीको मेम्फिसमा रहेको सेन्ट जुड चिल्ड्रेन्स रिसर्च अस्पतालका इन्फ्लूएन्जा जीवाणु विज्ञ रोबर्ट वेब्स्टरले भने, ‘पशुपक्षीमा जीवाणुको संख्या अथाह छ, तर ती सबै मानिसमा संक्रमित हुन पाएको छैन । यी जीवाणुले कुनै पनि बखत मानिसलाई हानि गर्न सक्छन् ।’
सार्स र हाल फैलिएको कोविड–१९ ले मानिसलाई दुःख दिएको र रोग सारेको उदाहरण पहिलो भने होइन । अफ्रिकामा ‘बुशमिट’ नाममा पशुपक्षीको शिकार र बिक्रीबाटै प्राणघातक इबोला फैलिएको मानिन्छ । बर्ड फ्लू सम्भवतः सन् १९९७ मा हङकङको बजारमा कुखुराबाट आएको थियो । दादुराको जीवाणु पनि गाईवस्तुबाट सङ्क्रमण भएर मानिसमा आएको विश्वास गरिन्छ ।
वैज्ञानिकहरूले नयाँ कोरोनाभाइरस पहिलो पटक कसरी संक्रमित भएर मानिसमा आयो भन्ने ठ्याक्कै ठम्याउन सकेका छैनन् । प्रमाणहरुले चमेरोबाट कोरोनाभाइरस उत्पत्ति भएको हुन सक्ने देखाएका छन् । यी चमेराले अरु पशुपक्षीलाई संक्रमित गरेका र यसले चीनको दक्षिणपूर्वी शहर उहानको अबैध बजारमा मानिसहरूलाई सङ्क्रमित गरेको आशंका छ ।
अहिले बन्द अवस्थामा रहेको ‘हुनान सिफुड होलसेल मार्केट (हुनान समुद्री थोक बजार)’ले दर्जनौं किसिमका वन्यजस्तुको मासु बिक्रीको विज्ञापन नै गरेको थियो जसमा विशाल छेपारो, गोहीको बच्चा र जंगली कुकुर जस्ता दर्जनौं प्रजातिका जीवजन्तु समेटिएका थिए । यी जीवजन्तुको फर्ममा उत्पादन गरिए पनि यिनीहरुलाई अक्सर वन्यजन्तुकै श्रेणीमा राखिन्थ्यो ।
उहान बजारबाट संकलित ३३ वटा नमुना परीक्षणमा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टी भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्, र तीमध्ये ३१ जना वन्यजन्तुकै कारोबार हुने केन्द्र वरपर भेटिएका थिए । घरमा लामो समय पालिने कुखुरा र सुँगुर जस्ता पाल्तु पशुसँग तुलना गर्दै विज्ञहरुले जंगली जनावरहरूमा पाइने जीवाणुका बारेमा कमै जानकारी रहेको बताएका छन् ।
उहानको पशुपक्षी बजार एशिया र अन्यत्र जस्तै थियो, जहाँ जनावरहरू बाँधिएका वा पिंजडामा राखिएका हुन्छन् । अधिकारकर्मीहरुका अनुसार कानुनी रूपमा पालिएका र अवैध रूपमा शिकार गरिएका जनावरबीचको भिन्नता छुट्याउन गाह्रो छ । प्रायः ताजा बेच्ने भन्दै बजारमा जताततै मारिन्छन् । विज्ञहरूले मानिसको सानो असावधानीले पनि समस्या निम्त्याउने र नयाँ जीवाणुहरु मानिसमा सङ्क्रमित हुने खतरा औंल्याउँछन् ।
‘तपाईंले जिउँदो जनावर देख्नुभयो भने त्यो पूरै मलमूत्रले ढाकिएको हुन्छ । जथाभावी काट्ने गरिएका कारण जताततै रगत पनि लागेको हुन्छ’, इकोहेल्थ एलायन्सका अध्यक्ष पिटर दासजाकले बताउनुभयो । यो संस्थाले नयाँ रोगहरुबाट मानिसलाई जोगाउन तथा वन्यजन्तुको संरक्षणका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ।
दासजाकले अधिक विश्वव्यापी यात्रा र व्यापारको सिलसिलामा मानिसको घुमफिर हुने भएपछि रोग फैलिने जोखिम बढ्नु स्वाभाविक रहेको बताए ।
ह्युस्टन विश्वविद्यालयमा चिनियाँ राजनीति विषयमा अध्ययनरत पिटर लीले चिनियाँहरुले वन्यजन्तुको स्वाद लिन थालेको नयाँ भएको बताए । देशको आर्थिक बृद्धिका कारण मानिसमा नयाँ किसिमका पशुको स्वाद लिने प्रवृत्ति बढेको उनको भनाई छ । चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा यतिखेर केही सीमित धनी वर्गको असन्तुष्टीले आम मानिसको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेको र जोखिम बढाएको भन्दै तिब्र आलोचना भइरहेको छ ।
‘यो दोस्रो पटक हो, पहिलो सार्स हो, यसपटक उहानमा देखियो । हामी तेस्रो पटक यस्तो चाहँदैनौँ’ सिचुआनबाट लाई जिनपिङले फोनमा बताए । ‘हामी उनीहरुलाई घृणा गर्दछौँ’ ३६ वर्षीया गृहिणी ताओ यीवेईले भने । उनी पनि वन्यजन्तुको बेचबिखनमा अस्थायी होइन, स्थायी प्रतिबन्ध लगाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन् । यसै महिना चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले जनस्वास्थ्यमा जोखिम निम्त्याउने वन्यजन्तुको अवैध कारोबारलाई ‘पूर्णरुपले अवैध र कडाइका साथ प्रतिबन्ध’ लगाउने घोषणा गरेका छन् ।
पूर्वी प्रान्त आन्हुईमा अधिकारीहरूले जंगली ब्याजर र मुसाहरुको फार्म चलाउन प्रतिबन्ध लगाएका छन् । तियानजिन बन्दरगाहमा वन्यजन्तुको बिक्रीमा संलग्न रहेको आरोपमा छजना व्यापारीलाई गिरफ्तार गरेको छ । चिनियाँ अधिकारीहरूका अनुसार हुवेईमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएपछि देशभर करिब १५ लाख बजार र अनलाइन संचालकको अनुगमन र जाँच गरिएको छ । करिब ३ हजार ७०० पसल बन्द गरिएका छन् भने करिब १६ हजार प्रजनन साइटलाई घेराबारा गरिएको छ ।
यी उपायहरू आगामी दिनमा कसरी निरन्तरता पाउँछन् भन्ने अद्यापी स्पष्ट छैन । यो प्रकोप सुरु हुनुभन्दा अघि चीनमा ५४ प्रजातिका पशुपक्षी बेच्न अनुमति थियो । तर घरपालुवा वा जंगली हुन् भन्ने छुट्याउन भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा समस्या थियो । रासस
फिलिपिन्सकामा लकडाउन उग्लंघन गर्नेलाई गोली हान्न आदेश
काठमाडौं, २० चैत (एजेन्सी) । फिलिपिन्सकामा राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टेले लकडाउन उग्लंघन गर्नेलाई गोली हान्न प्रहरीलाई
कोरोना कहर : चीनमा थप ३६ जनामा संक्रमण देखियो
बेइजिङ, १९ चैत (सिन्ह्वा) । चीनमा थप ३६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ ।
कोरोना कहर : युरोपमा मात्रै ३० हजार बढीको मृत्यु
पेरिस, १९ चैत (एएफपी) । कोरोना भाइरस महामारीका कारण युरोपेली मुलुकहरुमा मात्र ३० हजारभन्दा बढी
डब्लुएचओ भन्छ, ‘कोरोनाभाइरस नियन्त्रण गर्न अझै समय लाग्छ’
बेइजिङ, १८ चैत (एजेन्सी)। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)का क्षेत्रीय निर्देशक ताकेशी कासाईले एक वरिष्ठ अधिकारीले
मानव सभ्यताको रक्षाका लागि मिलेर लडौंँ : उपप्रम पोखरेल
लकडाउनमा हिरासतबाट भागे तीन अभियुक्त
नवल खड्का काठमाडौं, २० चैत । भूकम्पमा विश्वभरबाट सहयोग प्राप्त हुँदा सम्बन्धित पीडितसम्म पुग्न सकेन,
काठमाडौं, २० चैत । नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमणसँग जुध्नका लागि यही चैत २५ गतेसम्म सबैजना
सुर्खेत, २० चैत । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको हिरासतमा रहेका तीन जना थुनुवा बुधबार राति